Luma Touch ကိုမိတ်ဆက် Highly-မျှော်လင့် Upgrade - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Luma Touch ကိုမိတ်ဆက် Highly-မျှော်လင့် Upgrade
Luma Touch ကိုမိတ်ဆက် Highly-မျှော်လင့် Upgrade
LumaFusion အခုတော့ဗီဒီယို / အသံ၏ 12 သီချင်းများ, ပြင်ပစောင့်ကြည့်ပံ့ပိုးမှု, ညွှန်မှတ်ထောက်ပံ့နှင့်ပို
ဆုံးအစွမ်းထက်, Professional က, definition video တည်းဖြတ် App ကိုအဆိုပါစျေးကွက်အပေါ် iOS အတွက်ကယ်တင်တတ်၏
စန္ဒီ, UT (ဇွန်လ 17, 2019) - Luma Touch ကို (www.luma-touch.comLumaFusion -) ယနေ့ iOS အတွက်၎င်း၏လက်မှတ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်လျှောက်လွှာတစ်ခုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ဗားရှင်းသစ်၏ချက်ချင်းရရှိနိုင်မှုကြေညာခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ပြန်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, LumaFusion လျင်မြန်စွာအဓိပ္ပါယ်အဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ထားပြီး, မိုဘိုင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, သတင်းစာဆရာများ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အယ်ဒီတာများ, YouTube ကိုဖန်တီးသူနှင့်အယောင်ဆောင်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများအဘို့ကို iOS တည်းဖြတ်ရေး app ကို-ရှိရမည်။
ဒီနေ့ရဲ့ကြေငြာချက်နှင့်အတူ LumaFusion 12 ကဗီဒီယိုပုဒ်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် 6K ဗီဒီယိုကိုထောက်ပံ့အတူအစွမ်းထက် features အသစ်နှင့်တစ်ဦးကြော့အသစ်က UI ကိုတစ်အိမ်ရှင်မိတ်ဆက်နှင့်ထိရောက်စွာပုဒ်4မှထောက်ခံ Audio / Video ပုဒ်၏နံပါတ်နှစ်ဆ - ထို iOS ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပထမဦးဆုံး ဖန်ဆင်းခြင်းဈေးကွက်။
ဇွန်လ 27, 2019 မတိုင်မီ LumaFusion purchasing ဖောက်သည် $ 50 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ် 14.99% လျှော့စျေးနှုန်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ရိုင်ယန် Connolly တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနာမည်ကျော်ယူကျု့ချန်နယ်၏, စာရေးဆရာ, ဒါရိုက်တာနှင့်ဖန်တီးသူ, ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အဓိကရုဏ်း။ သူ LumaFusion 2.0 စမ်းသပ်နှင့် add ဤရှိခဲ့ထားပြီး: "LumaFusion 2.0 တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်အရည်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းမိုဘိုင်းအယ်ဒီတာ။ ငါအရင်ထွက်စတင်သောအခါဒီတည်ရှိဆန္ဒရှိ! ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်ဆန်စွာနှင့်အရည်သည်နှင့်လည်းတည်နေရာကင်းထောက်ပေါ် Pre-vis လုပ်နေဘို့စုံလင်သည်။ "
ကြော့နယူး UI ကို: အားလုံးအသစ်က vector icon များ, သော့ခတ်ပုန်းအောင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ပုဒ်အသံတိတ်နိုင်ရန်အသစ်လမ်းကြောင်းခေါင်းစီးများ, နှင့်သင်တစ်ခုတည်းထိတွေ့နှင့်သင်၏ပြင်ဆင်ရန်အတွက်မဆိုတည်နေရာခုန်နိုင်တယ်သင့် timeline တစ်ခုလှပသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အတူ, သင့်တည်းဖြတ်ရေးချောမွေ့;
ပိုများသောသီချင်းများ:6ထံမှတစ်ဦးကသိသိသာသာတိုးအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် 12K ဗီဒီယိုအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအပုဒ် (6 ကဗီဒီယို / အသံပုဒ်နှင့်6နောက်ထပ်အသံပုဒ်)4မှခြေရာခံ,
နယူး Timeline ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: သင့်ရဲ့မြေတပြင်လုံးစီမံကိန်းကိုတွေ့မြင်နှင့်သင့်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်တိကျသောတည်နေရာခုန်ဖို့ကမြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်;
နယူး Shuttle ထိန်းချုပ်ရေး: စာနယ်ဇင်း-and ကိုင်ပြီးပြည့်စုံသည် frame ကိုရှာဖွေကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများမှာပွတ်တိုက်ပေးဖို့ Play စခလုတ်ကို;
track header လမ်းကြောင်း link ကို / လင့်ခ်ဖြုတ်, လမ်းကြောင်းသော့ခတ်, ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်စကားအားဖြင့်၎င်း,
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တည်းဖြတ်ခြင်း: မူလတန်းအပေါ်ဗီဒီယိုနှင့်အသံကလစ်များ (ကျောက်ဆူး) လမ်းကြောင်းကသင်ချင်တဲ့လမ်းကိုတည်းဖြတ်ကြကုန်အံ့,
အစွမ်းထက်ညွှန်မှတ်: ထိရောက်မှုမှတ်ချက်များနှင့်သင်၏ကလစ်များနှင့်အချိန်ဇယားမှညွှန်မှတ် add;
ပြင်ပပြရန်: ကြီးများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါနှင့်အသစ်သော UI ကိုအပြင်အဆင်နှင့်အတူသင့် timeline နှင့်စာကြည့်တိုက်များအတွက်ပိုပြီးအခန်းတစ်ခန်းရဖို့;
GNARBOX 2.0 SSD ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု: အမျှကောင်းစွာအဖြစ် GNARBOX 1.0 ထောက်ပံ့ဘို့တိုးတက်မှု;
တည်းဖြတ်ရေးများစွာနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်မှု: ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက် LumaFusion ပြုလုပ်ခြင်း။
အဘယ်အရာကို LumaFusion အတွက်တောင်မှ သာ. ကောင်း၏တယ်:
LumaFusion အပေါင်းတို့၌အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များအပြင်, Luma Touch ကိုလည်းအသုံးပြုသူများကို '' အကြိုက်ဆုံး features တွေအများအပြား ယူ. ပင်ပိုကောင်းသူတို့ကိုဖန်ဆင်းအပါအဝင်:
ဓာတ်ပုံများစာကြည့်တိုက် ယခုအပြည့်အဝအယ်လ်ဘမ်, ခဏနှင့်အသစ်မီဒီယာအမျိုးအစားများအတွက်အသိုက်ဖိုလ်ဒါကို support;
အလွယ်တကူအကူးအပြောင်းပူးတွဲပြီ overwrite လို့အပုဒ်ပေါ်မှာကလစ်ပ်ကိုချုံ့။
LumaFusion ဗားရှင်း 2.0 $ 29.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာများအတွက် App Store မှာပေါ်ချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါ, သို့သော်ဇွန်လ 50, 14.99 သည်အထိ $ 27 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖို့ 2019% လျှော့ပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.luma-touch.com.
Luma Touch ကို, LLC အကြောင်း
Luma Touch ကိုအတော်လေးဖန်တီးမှုမီဒီယာဆော့ဖ်ဝဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုထံအပ်နှံအသည်းအသန်အင်ဂျင်နီယာများ, ဒီဇိုင်နာများ, နှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပူးတွဲတည်ထောင်သူခရစ် Demiris နှင့် Terry မော်ဂန်များစွာကိုဦးဆောင်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့် iOS နဲ့ Windows အပေါ်သက်ရောက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
FiLMiC Inc မှစတင်နှစ်ပတ်လည် #FiLMiCFest ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမိုဘိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် - ဇူလိုင်လ 24, 2019
Accusonus, ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများအဘို့အ Intelligent, လူပျို knobs အသံပြုပြင်ရေးနှင့်ဆူညံသံလျှော့ချရေး Plug-ins ၏အသစ်လွင်ဆုံးမိသားစုမှအဆင့်မြင့်အသံထုတ်ယူခြင်းဆောင်ကြဉ်းအသံအင်ဂျင်နီယာများ, podcasts - ဇွန်လ 25, 2019
Luma Touch ကိုမိတ်ဆက် Highly-မျှော်လင့် Upgrade - ဇွန်လ 17, 2019
#LumaFusion #LumaTouch #mobilecinema Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ပန်းသီး ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor iOS ကို အိုင်ပက် iPhone ကို မိုဘိုင်း အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် postproduction SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို	2019-06-17
ယခင်: GB ကို Labs က Backblaze B2 မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့အတူအလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှုကိုကြေညာ
နောက်တစ်ခု: DTC အသံလွှင့် Nano HD ကို RF နီဇ် skyrunning ပွဲအတွက်ချထား